Conte oo ganaaxiisii Tobanka bilood ahaa laga dhigay keliya Afar bilood. - Caasimada Online
Home Warar Conte oo ganaaxiisii Tobanka bilood ahaa laga dhigay keliya Afar bilood.
Conte oo ganaaxiisii Tobanka bilood ahaa laga dhigay keliya Afar bilood.
Macalinka kooxda Juventus Antonio Conte ayaa ganaxiisa laga dhimay lix bilood ka dib markii horay loo ganaanxay toban bilood. Wuxuuna xor u noqon doonaa inuu kooxdiisa leyliyo 9ka bisha December ee soo aadan.
Ninka reer Talyaani ayaa ka ganaaxnaa inuu qabto ciyaaraha kooxda Juventus, ka dib markii lagu helay dambi ah inuu sameeyey qamaar sharci darro ah oo uusan ogeysiin booliska ama qolyaha Ispooriga, waana intii uu kooxda Siena macalin ugu ahaa Serie B.
Conte qareenadiisa ayaa racfaan ka qaatay ganaaxa, maxkamada ayeyna u gudbiyeen in gabi ahaan laga qaado ganaaxa saaran tababaraha balse looma ogolaan iyadoo mudada ciqaabta la yareeyey.
Antonio ayaa ganaaxiisu waqtigaan ku egyahay 8da bisha December, wuxuuna xor u yahay inuu kooxdiisa leyliyo kulanka ay 9ka Decemper la ciyaareyso kooxda Palermo.